IBSA JAARMAY ADDA BILISUMMAA OROMOO BIYYA ALAA 22/8/2021 | OROMOTV
IBSA JAARMAY ADDA BILISUMMAA OROMOO BIYYA ALAA 22/8/2021
Gareen Gantuu fi Sseer-dhaablootaa maqaa ABOn daldalan Adda Bilisummaa Oromoo (ABO) bakka hin bu’an
ABOn Jaarmiyaa Oromoo angaftichaa fi kallacha Qabsoo Bilisummaa Oromoo ta’uun Jaarra walakaaf Hogganummaa waligalaa keennaa as ga’uun ifaa dha. Baroota kana hunda keessatti bu’a ba’iileen injifatnoo fi gufatuun walmakan gochaa farreen keessaa fi alaan ABO irra ga’aa ture adeemsa qabsoo dhaabuu baatullee dhibdeelee haalan rakkisoo turan uumuun hin oolle.
Adeemsa yeroo dhihoo asittimmoo gartuun tokko kan Asmara irra Dhaabicha waliin Fulbana 2018 Fifinnetti deebi’e maqaa Hooggannummaa golgaa godhatuun badii Dhaabicha keessatti dhoksaan geggeessaa ture murna PP kan biyyan bulcha jedhu waliin wa’ilummaa uumuun hoojii diiggaa itti ture bara 2019 ifatti baafatuun mullate. Gartuun kunis Ummata Oromoo fi Saboota Itophiya biratti ABO-Hilton/ABO-PP jedhamuun yeroo beekamu, maqaa Dhaabichaa fi Hooggana ABO seerawa of fakkeessuun gartu PP dhaan gargaarame walgahiilee seeran alaa dhooksaa fi ifattis geggeessa tureera.
Haala kana keessattis Hoogganota ABO guutummatti hiisisuun Jaarmiyan kun akka lafa hin qabanne gochuu irratti gartuun ABO-Hilton jedhamuun beekamu kan adda durummaan Ararsoo Biqila, Ibsaa Nagawo, Tolera Adabaa, Qajeela Mardaasaa fi Atoomsa Kumsaa keessatti argaman durgoo guyya guyyaan argatan duwwaaf jecha ergama PP daran cimsuun hoojii diiggaa fi afaan-faajji itti fufee jira.
Gartuun kun Hogganoota ABO qaroo hiisisee HD dhaabbichaas erga ugursiisee booda maqa HD fi I/HD ofumaan ofiif kennuun hojii diiggaa itti fufulle qaamumti Mootumma inni gartuu kana ergatuu karaa Boordii Filannoo Biyyoolessaa mootummichaallee beekkamtii dhowwachiisuun gartuun kun ABO seerawa akka hin taane murtee dabarseen iyyata gartuu kanaa kuffisuun ni yaadatama.
Amma yeroo ammaa kanatti garuu PPn muddama bifa hedduun ishee qunnammeef gartuu hojii ololaaf dhimma itti baatu kana akka abbidda dhaamsituu PPtti (PP’s Fire fighters) gad baasuun ibsaa ABO hin ilaallanne maqa ABOtiin akka baasaanii fi Media mottummichii fi waa’illaan mootumma harkaa qaban hunda irratti ba’ani akka maqa ABOn daldalan sagantaa ballaa diriirsuu dhaan duula Ummata Oromoo irratti bifa haaraan bananii jiru. Duula abidda PP qabate dhaamsuu keessatti gartu Hilton dabalatee kanneen wagga 21 oliif bakka ABO ga’anii hin beekne namoota akka Galaasaa Dilbo, Dimaa Nagawoo fi fakkaatota isaani dabalate PP irra goruun Ummata Oromoo irratti duulaa jiraachuu isaani Sabni Oromoo akka qalbeeffatu fi irra of eegu yaadachiisuu feena.
Kanaaf jecha gantootni akka Ararsoo Biqilaa, Qajeelaa Mardaasaa fi waa’illan isaaniis maqaa Hayyu Durummaa fi Itti Aaana Hayyu Durummaan of golguun Sabqunamitiillee PP adda adda irratti afaan-faajii isaan uumaa jiran kan Dhaaba guddicha, ABO hin ilaallannee ta’uu mirkaneessina. Ummatni keenyaas kana hubatuun xibaara karaa gartuu kanaa ololamurraa of eeggataa Caasaa sirnaa dhaabichaa irra kallatti kennamu akka hordofu yaadachiisna.
Dhuma irratti kanneen dogoggortani mooraa gantootaatti dabalamtanis ta’e kanneen dulluma keessa yeroo itti firatti baqachuu maltaanitti agoobora diinaa jala seenu filattan akka qalbi jijjirrattaniif gorsa Oromummaa akeeku feena. Daandii ABOn saaqee fi imalli Ummatnii Oromoo Kallacha isaa jalatti hiriiruun eegalee dhalootattis darbee jiraachuu isaa ijaaramuu Qerroo Bilisummaa Oromoon (QEERROOn) mirkanaa’uu isaa addunyaanuu erga hubatee asitti adeemsaa kana humnii dhaabuu danda’u akka hin jirrees beekuun ejjennoo ofi sirreffachuuf ni gargaara jennee amanna.
Addi Bilisummaa Oromoo Kallacha Qabsoo Bilisummaa Oromooti!!
Adda Bilisummaa Oromoo- Damee Jaarmiyaa fi Siyaasa Biyya Alaa